युगसम्बाद साप्ताहिक - सरकारले फितलोपन देखाउन हुँदैन - महेश्वर शर्मा
Thursday, 04.09.2020, 07:48pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 01.14.2020, 12:16pm (GMT+5.5)
“सासू मरिन् बधु बियाइन– जत्तिको तत्ति” भनेझैं २००७ सालदेखि आजसम्म साल फेरिए जस्तै सरकार पनि फेरिंदै आए । जाने आउने क्रम चलेकै छ । यो हिसावबाट त केही भएकै भन्नुपर्छ होला, तर जनतालाई भने भालेरुख पालेजस्तो अनुभव भैरहेको छ । उपलब्धिका हिसावबाट हेर्दा बितेका ती सात दशक थारै भएर बितेका हुन् भने हुन्छ । छैन भनौं भने यहाँ प्रकृतिले दिएको सबैथोक छ, तर प्रकृतिले दिएर मात्रै नहुने रहेछ । पुर्खाले कमाइदिएको जोगाउने र जनतालाई अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारबाट बचाउने निष्ठा र सक्रियता नेतृत्वमा नदेखिएको अनुभवले वामपन्थी पनि दामपन्थी भए भने अरु कसले जोगाउला खै ? भनेर भुक्तभोगीहरु नैराश्य प्रकट गर्छन् ।
जता हे¥यो उतै जनसेवाका बहानामा आफंैले मेवा खाने मेसो चलेको देखिन्छ । सरकार आदेश–निर्देश दिन्छ । तर मिचाहा दलाल–ठेकदार, कालाबजारियालाई नियममा रहन बाध्य पार्न सक्दैन । बरु उनीहरु नै सरकारलाई आदेश फिर्ता लिन र नियम कानुन संशोधन गराउन सफल हुन्छन् । ठेकदारहरुले आफूलाई सव्य पार्ने हिसावबाट सार्वजनिक खरीद नियमावली नै पटकपटक संशोधन गराउन सफल भएको देखियो । सरकारले आफ्ना आदेश निर्देश र नियमावलीको औचित्य सिद्ध गर्न सकेको देखिएन । सरकारले जनताका पक्षमा दह्रोपन देखाउन नसक्नुको अर्थ बुझ्न गाह्रो भो भनिंदैछ ।
त्यसैले आफ्ना आदेश–निर्देश र नियम कानुन सरकारले दृढताका साथ पालन गराउन सक्नुपर्छ । लुते र दोधारेपन देखाउन सरकारलाई सुहाउँदैन भनेको सुनिन्छ । सरकारमा हुनेहरुले आफूलाई फाइदा हुने भए जनतालाई पेल्ने र सार्वजनिक हित र चासोका विषयमा भने व्यापारी–दलाल र ठेकदारका पक्षमा उभिने हो भने सरकारप्रति मात्रै होइन, व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । गत वर्ष दशैंकै मुखमा सरकार चिनी उद्योगी– व्यापारीका पक्षमा उभिदा जनताले प्रतिकिलो चिनी ९०–९५ रुपैयाँ सम्ममा किन्न परेको विडम्बना बिर्सिएको छैन । त्यस्ता कुरा दोहारिन दिन हुँदैन ।
अहिले विदेशी पर्यटक ल्याएर फलीफाप हुन्छ भनिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम पनि देखिने र दाम पनि आउने सोचमा पाखा पखेरा जताततै जथाभावी डोजर जोतेर पैरा चलाएका छन्, माटो बगाएका छन् । बोटबिरुवा, चौतारा, पोखरी मासेका छन्, उर्बर खेतबारी र पानीका मुहान पुरेका छन् । नेपालको सम्पत्ति भनेकै माटो हो, बगेको माटो फर्कदैन । फेरि विदेशी पर्यटक यहाँ बाटो हेर्न होइन, प्राकृतिक वैभव हेरेर रमाउन आउने हुन् । त्यसैले बरु खट्करीका पदमार्गहरु डाँडाडाँडा पु¥याउने र केबुलकारहरु निर्माण गर्नेतर्फ लागेमा विदेशीहरु बैरिने थिए । नेपालको सौन्दर्य भनेकै यिनै डाँडाहरुमा छ भन्ने बुझेर काम गर्ने होस कहिले आउँछ खै ? आजका जस्तै बाटो बनाउने निहुँमा माटो बगाउने हो भने नेपाल भोलि कङ्काल जस्तो देखिन बेर लाग्ने छैन ।
रचनात्मक आलोचना पनि नसहने प्रवृत्ति सरकारमा बस्नेहरुमा देखिन्छ । तर आलोचना सकारात्मक दिशाको सूचक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । आलोचना नै भएन भने अराजक प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँछ र कतिपय अवस्थामा सरकार नै अराजक बाटोमा डोरिन पनिसक्छ भनेर पनि होस राख्नुपर्ने हुन्छ । नाम र कामका लागि गरिने राजनीतिको कुनै भर हुँदैन, जता पनि फर्कन सक्छ । हिजोआज पनि यस्तै यस्तै लक्षण देखिन थाले भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । जनता त आज त्यस्तैखाले विकृति वेहोर्न विवश पारिन्छनु भने यो दिशा सच्याउन राज्य संचालकहरु सचेत हुनुपर्ने अवस्था हो ।
चरित्र नै दरिद्र छ भने समृद्धिको आश गर्नु व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले भन्नुपर्छ मूलकुरा चरित्र हो । यो समान्य घरगृहस्थीदेखि राज्य संचालनका उच्च तहमा बस्ने सबैमा लागू हुनुपर्छ । अमूर्त कुरा गरेर केही समय जनतालाई रल्याउन सकिए पनि त्यस्ता चरित्रबाट विकास र समृद्धि आउँदैन । भोलिको रुपलाई वर्तमानका क्रियाकलापले संकेत गर्छन् । वर्तमान नै अँध्यारो भयो भने भोलिको उज्यालो आश्वासनले दिन सक्दैन । दायित्व निर्वाहविना रित्ता आश्वासनमा भरपर्नु भ्रम पाल्नु मात्रै हो, आफैंले आफूलाई धोका दिनु जस्तै हो । सरकारका आजका कतिपय क्रियाकलापबाट त्यस्तै भ्रम फैलिएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
पहिले गोरखापत्रमा छापिएका समाचारलाई जनताले आधिकारिक समाचार सम्झेर प्रामाणिक रुपमा लिन्थे । तर आज ? आज त झूट बोल्ने नेता र सरकारका ढाँटछलका समाचारका रुपमा लिन थालेको सुनिन्छ । किन यस्तो भयो ? यो त दुर्भाग्य नै भएन र ? त्यसैले गोरखापत्रलाई जनताले साविकैरुपमा ग्रहण गर्ने स्थिति तयार पार्न सरकारले सोच्नु प¥यो ।